४० करोड २७ लाखको हकप्रद बेच्दै एसियन लाईफ, कहिले हुन्छ सुरु ? - Arthatantra.com
काठमाडौ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले ४० करोड २७ लाख बराबरको हकप्रद निष्कासन गर्ने भएको छ । ईन्स्योरेन्सले वीमा समितिको निर्देशन अनुसार दुई अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउने क्रममा ५० प्रतिशत हकप्रद बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले उक्त हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।
कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआएबीएल क्यापिटल रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ७ रुपैयाँ ८६ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२५ रुपैयाँ ५४ पैसा छ ।
धितोपत्र बोर्डले एसियनलाई २ः१ अनुपातमा ४० लाख २७ हजार ९६६ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । गत आर्थिक वर्षको कमाईबाट २० प्रतिशत बोनस बितरण गरि चुक्ता ८० करोड ५५ लाख रुपैंया पुर्याएको इन्स्योरेन्सले ४० करोड २७ लाख रुपैंयाको हकप्रद अनुमति मागेको थियो । उक्त हकप्रद निष्काशन पश्चिात कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब २० करोड ८३ लाख रुपैंया पुग्नेछ ।
विमा समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीले ०७५ असारसम्ममा चुक्तापूँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनु पर्नेछ । तोकिएको पूँजी पुर्याउन कम्पनीले थप सवा ७९ करोड रुपैंया पूँजी बिस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हाल कम्पनीले ७२ वटा उपशाखा तथा २३ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत सेवा दिदै आएको छ ।
तरलता सहज गराउन राष्ट्र बैंकको १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा, सेयरबजारमा कस्तो असर ? काठमाडौ । पछिल्लो समय विकराल रुप लिदै गरेको तरलता समस्याले समाधानको बाटो समातेको छ । […]
गर्नुहोस कारोबार, नेप्सेमा ५१ लाख ६३ हजार कित्ता नयाँ सेयर थपियो काठमाडौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नयाँ सेयर थपिएको छ । सेञ्चुरी बैंकको ५१ लाख ६३ हजार ९४२ […]